Fandrobana 2009 : « Mitso-drano anareo aho! » -
AccueilRaharaham-pirenenaFandrobana 2009 : « Mitso-drano anareo aho! »
Fandrobana 2009 : « Mitso-drano anareo aho! »
Nataon’ny fitondrana Tetezamita hatramin’ny farany mihitsy izay nampanginana sy nampanadinoina ny raharaha 26 Janoary na “Alatsinainy Mainty”, nandorana sy nandrobana ny tanàna manerana an’i Madagasikara, indrindra ny teto Antananarivo renivohitra.
Hifanatrika ao amin’ny TVM androany ny kandidà Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Azo antoka fa tsy maintsy hibahan-toerana amin’izany ny raharaha roa dia ny 26 Janoary sy ny 7 Febroary 2009. Nihazakazahan’ny fitondrana HAT ny nitsarana ny raharaha 7 Febroary, teo am-pelatanan’i Andry Rajoelina samirery rahateo ny fahefana tamin’izany, nataony tahaka ny tsy nisy kosa ny raharaha 26 Janoary, izay namoizana ain’olona maherin’ny 500 ankoatra ny fandrobana sy ny fandorana ny tanàna.
Maro ny zavatra azo resahina mikasika ny raharaha 7 Febroary manokana, ny kolonely Charles Andrianasoavina moa efa nanao ampamoaka mikasika izany, izay milaza ny fisian’ny andian’olona mitam-piadiana avy amin’ny mpanohana an’i Andry Rajoelina, nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana. Mbola mandeha, ary azo jerena amin’ny tambazotra ihany koa ilay fivoriana notarihin-dry Augustin Andriamananoro sy Haja Resampa, ny amin’ny tsy maintsy hiampangana an’i Marc Ravalomanana ho mpamono olona.
Androany kosa dia hitamberina ao an-tsain’ny vahoaka malagasy, ireo olona nanana fianakaviana maty, ireo rava fananana ilay fanambarana goavana nataon’i Andry Rajoelina tamin’ireo mpandroba teny Anosy nialohan’ny niatombohan’ny fandrobana sy ny fandorana tanàna nanao hoe: “mitso-drano anareo aho!”. Lasa nisitri-belona i Andry Rajoelina ny ampitson’ny 26 Janoary 2009, navelany teo amin’ny kianjan’ny 13 Mai ireo mpiara-dia taminy. Mbola tsy nisy Fitsarana hatramin’ny androany ny raharaha 26 Janoary, kanefa dia io milaza hanova an’i Toamasina ho lasa Miami io no atidohan’izany.
Mbola olana goavana eto amin’ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana na dia manao izay tratra ny heriny aza ny mpitandro filaminana. Miparitaka rahateo koa ny fitaovam-piadiana manomboka any amin’ny basim-borona hatrany amin’ny basy mahery vaika toa ...Tohiny